intengo yemoto ebhulekile 1 hp 5hp 2 hp brake motor suppliers
umakhi wemoto Brake
I-Industrial Brake Motors
Izinhlobo ezinhlobonhlobo ze-clutch brake motor, Electric Brake Motor ngentengo ephambili eChina. Abahlinzeki bezimoto zeBrake kanye noMenzi, Ukusetshenziswa Kwezohwebo Nezimboni.
Sihlinzeka Ngekhwalithi ephezulu, Amanani Aphansi Wezimboni Zamabhuleki.
Iminyaka yokuhlangenwe nakho kokukhiqiza amabhuleki ukukunikeza ikhwalithi ephezulu futhi eqinile. 1 hp brake motor price, 2 hp brake motor, A brake motor is a integrated brake and motor package, imvamisa iboshwe ndawonye ngokukhwelana kwe-C-face flanges. Amabhuleki ezimoto kagesi asetshenziselwa ukwehlisa noma ukubamba imithwalo yemoto lapho ugesi unqunywa ngenhloso noma ngengozi. amabhuleki abahlinzeki bemoto, 5hp amabhuleki wemoto.
Uchungechunge luqukethe izigaba ezintathu, ama-brake motors asynchronous General Purpose Industrial avalelwe ngokuphelele 3 hp motor brake. I-Electromagnetic Brake Motors ivula ubufakazi bokudonsa, noma imiklamo yobufakazi bokuqhuma.
Uhla olubanzi lwe-elekisi yama-elektrri: isigaba esisodwa, ezintathu, ama-motor ama-brake nge-braking mzuzu kanye nesivinini esikhulu sokusebenza. ngezinketho ezahlukahlukene nokulungiselela okwandayo.
YEJ uchungechunge kagesi ukubopha motor, yakhelwe ngokuvumelana IEC ejwayelekile, AC Brake Motors nge Industrial Phakamisa Motor Brake. Ama-3 Phase Induction motors, ama-Brake motors, i-Speed ​​Variable motor. Thola lapha imininingwane ye-Electromagnetic Brake Motor.
I-electromagnetic disc brake inikwe amandla, kungaba yi-DC noma isigaba sesithathu samanje se-AC. Imvamisa, ama-servo motors abuyiselwa lapho kufakwa khona amabhuleki.I-Power-Off Operation Inertia Dynamics AC-isitayela, amabhuleki ezimoto asetshenziswa entwasahlobo enzelwe ukwehlisa noma ukupaka imithwalo engaphakathi lapho i-voltage icishiwe. I-Cariper yokupaka engemuva kwe-Servo 3C0998281. Zitholakala emiphandeni ye-6 & 12 spline (Grove) .I-brake rotor pad iyinto ejwayelekile emotweni yanamuhla.
Uma eminye yale mikhiqizo ingeyakho, sicela uxhumane nathi!